JỌN 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (JỌN 1)
Site nꞌoge ihe nile bidoro, Okwu ahụ na Chineke nọkwa.
E kere ihe nile site nꞌaka ya. Nꞌezie, ọ dịghị ihe ọ bụla e kere eke nke a na-ekeghị site nꞌaka ya.
Nꞌime ya ka ihe nile nwere ndụ siri nwee ndụ ha, nꞌihi nke a, ndụ ahụ dị nꞌime ya na-enyekwa ndị nile bi nꞌụwa ìhè.
Ezi ndụ ahụ dị nꞌime ya bụ ìhè na-enwu nꞌime ọchịchịrị. Ọchịchịrị ọ bụla enwebekwaghị ike ịmenyụ ìhè ahụ dị nꞌime ya.
Ọ dị otu nwoke Chineke zitere a na-akpọ Jọn.
Jọn bịara ka ọ kọwaara mmadụ nile ihe banyere ìhè ahụ.
Nꞌikpeazụ, Okwu ahụ bụ ìhè nke ụwa, bịara nꞌụwa. Ọ bịara inye onye ọ bụla bi nꞌụwa ìhè.
Ọ bịara nꞌụwa, bụ ụwa ahụ o kere nꞌonwe ya, ma ụwa amaghị ya.
Ọ bịara nꞌụwa ahụ bụ nke aka ya, ma ndị ahụ bụ ndị nke ya anabataghị ya.
Ma ndị nile naara ya, ndị nile kweere nꞌaha ya, ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke.
A mụghị ndị a kweere na ya site nꞌọmụmụ nke anụ ahụ, ma ọ bụ site nꞌọchịchọ nwoke, ma ọ bụ site na ntụpụta mmadụ, kama ịmụ ọzọ a sitere na Chineke nꞌonwe ya.
Jọn omee baptizim mere ka igwe mmadụ ahụ nile mata Kraịst mgbe o tiri mkpu sị, “Lee! Onye a bụ onye ahụ m gwara unu ihe banyere ya, sị, onye dị ukwuu karịa m na-abịa, ọ dị ukwuu karịa m nꞌihi na ọ na-adị rị tupuu amụọ m.”
Nꞌihi na iwu sitere nꞌaka Mosisi bịa, ma ugbu a, Jisọs Kraịst ewetarala anyị amara na eziokwu.
Mgbe ahụ ndị isi ndị Juu bi na Jerusalem zigara ụfọdụ ndị nchụaja ụlọ nsọ ukwu Chineke, na ndị Livayị naeje ozi nꞌụlọ nsọ ahụ, ka ha bịakwute Jọn, jụọ ya ajụjụ sị, “Ị bụ onye?”
Ma Jọn omee baptizim ezoghị ihe ọ bụla nꞌebe ha nọ. Kama ọ gwaghere ha ọnụ sị ha, “Mụ onwe m abụghị m Onye nzọpụta ahụ.”
Ma ndị nchụaja ahụ jụrụ Jọn ajụjụ ọzọ sị ya, “Onye kwanụ ka ị bụ? Ị̀ bụ Ịlaịja?” Jọn zara ha sị, “É,è, abụghị m Ịlaịja.” Ha jụrụ ya ajụjụ ọzọ sị, “Ị̀ bụ onye amụma ahụ Mosisi gwara anyị ihe banyere ya?” Jọn zakwara sị ha, “Ọ dịghị! Abụghị m onye amụma ahụ unu na-ekwu ihe banyere ya.”
Ndị nchụaja ahụ jụrụ Jọn ajụjụ ọzọ sị ya, “Onye kwanụ ka ị bụ? Biko gwa anyị eziokwu ka anyị nweta ọsịsa dị mma anyị ga-asa ndị zitere anyị.”
Mgbe ahụ Jọn gwara ha sị, “Abụ m nanị olu na-eti mkpu nꞌọzara na-asị, ‘Jikerenụ nꞌihi ọbịbịa nke Onyenwe anyị!’ Nke a bụ mmezu amụma ahụ Aịzaya buru nꞌoge ya.”
Ndị nchụaja ahụ e zipụrụ ịjụ Jọn ajụjụ a sitere nꞌetiti ndị Farisii bịa.
Ha jụrụ Jọn ajụjụ ọzọ sị, “Ọ bụrụ na ị bụghị Onye nzọpụta ahụ, ma ọ bụ Ịlaịja, ma ọ bụ onye amụma ahụ, gịnị mere i ji eme ọtụtụ mmadụ baptizim?”
Jọn zara sị ha, “Ana m eji mmiri efu eme mmadụ baptizim, ma ọ dị otu nwoke guzo nꞌetiti unu onye unu naamataghị, onye ga-ebido ọrụ ya nꞌoge na-adịghị anya site ugbu a.
Ọ bụkwa ihe banyere ya ka m na-agwa unu. Nꞌezie, eturughi m ịtọghepụ eriri dị nꞌakpụkpọ ụkwụ ya.”
Ihe ndị a nile mere nꞌobodo nta a na-akpọ Betani nke dị nꞌofe mmiri osimiri Jọdan. Nꞌebe ahụ ka Jọn nọ naeme ndị mmadụ baptizim.
Nꞌechi ya, mgbe Jọn hụrụ Jisọs ka ọ na-abịa nꞌakụkụ ebe ọ nọ, o tiri mkpu sị, “Lee Nwa atụrụ Chineke, onye naebupụ mmehie ụwa!
Onye a bụ onye ahụ m gwara unu ihe banyere ya. Chetanụ na m gwara unu sị, ‘Nꞌoge na-adịghị anya otu onye dị ukwuu karịa m ga-abịa. Ya onwe ya bukwa ụzọ dịrị. Ọ na-adịkwa ruo mgbe nile ebighị ebi.’
Amatakwaghị m na ọ bụ ya. Kama ana m eme-ndị mmadụ baptizim ebe a ka ọ dịrị m mfe igosi ya nye ndị Izirel nile.”
Ihe ndị a nile mezuru nꞌahụ nwoke a. Nꞌihi nke a ana m agbasi ama ike na nwoke a bụ Ọkpara Chineke nꞌeziokwu.”
Nꞌechi ya kwa, Jọn na mmadụ abụọ ndị na-eso ụzọ ya, guzoro nꞌotu ebe.
Mgbe ọ hụrụ Jisọs ka ọ na-agafe nꞌebe ahụ ha nọ, o legidere ya anya sị, “Lee Nwa atụrụ Chineke!”
Mgbe mmadụ abụọ ahụ nụrụ ihe Jọn kwuru, ha tụgharịrị soro Jisọs.
Jisọs lere anya nꞌazụ hụ ka mmadụ abụọ ahụ na-eso ya. Ọ jụrụ ha sị, “Onye ka unu na-achọ?” Ha zara ya sị, “Onye ozizi olee ebe i bi?”
Jisọs sịrị ha, “Bịanụ ka unu hụrụ.” Nꞌotu oge ahụ, ha sooro Jisọs gaa nꞌebe o bi. Ha sooro ya nọgide nꞌebe ahụ nꞌụbọchị ahụ, nꞌihi na ọ bụ ihe dị ka elekere anọ nke anyasị ka ha jiri zute ya nꞌụbọchị ahụ.
Otu nꞌime mmadụ abụọ ahụ hụrụ Jisọs soro ya, bụ Anduru nwanne Saimọn Pita.
Anduru siri nꞌebe ahụ pụọ chọta Pita nwanne ya sị ya “Anyị achọtala Onye nzọpụta ahụ.”
O duuru Pita bịarute nꞌebe Jisọs nọ. Mgbe Jisọs hụrụ Pita, o legidesịrị ya anya ike gwa ya okwu sị ya, “Ọ bụ ezie na aha gị bụ Saimọn nwa Jọn ma site taa gaa nꞌihu, aha ọhụrụ gị bụ Pita, nke pụtara Nkume!”
Nꞌechi ya, Jisọs kpebiri ijeru Galili. Mgbe o ruru ebe ahụ ọ hụrụ Filip gwa ya okwu sị ya, “Soro m.”
Filip a bụkwa onye Betsaida, nke bụkwa obodo Anduru na Pita.
Emesịa, Filip pụrụ chọta nwoke a ana-akpọ Nataniel gwa ya sị, “Anyị ahụla Onye nzọpụta ahụ. Onye ahụ Mosisi na ndị amụma kwuru ihe banyere ya, Jisọs nwa Josef, onye obodo Nazaret.”
Ma Nataniel zara Filip sị ya, “Gịnị ka ị na-ekwu? Ị̀ sị na ọ bụ Nazaret? Ọ dị ihe ọma ọ bụla pụrụ isite na Nazaret pụta?” Filip zara sị ya, “Bịa ka ị chọpụta nꞌonwe gị.”
Mgbe Jisọs hụrụ Nataniel ka ọ na-abịa nso ebe ọ nọ, ọ sịrị, “Lee! Nke a bụ nwa afọ Izirel nꞌeziokwu! Aghụghọ ọ bụla adịghị nꞌime ya!”
Nataniel jụrụ Jisọs ajụjụ sị, “Ì si aṅaa mata onye m bụ?” Ma Jisọs zara ya sị, “Tupuu Filip akpọọ gị, ahụrụ m gị ka ị nọ nꞌokpuru osisi fiigi ahụ.”
Nataniel zara sị ya, “Onyenwe anyị, nꞌeziokwu ị bụ Ọkpara Chineke ahụ! Ị bụkwa Eze Izirel!”
Jisọs jụrụ Nataniel ajụjụ sị, “Ì kweere na m bụ Onye nzọpụta ahụ nꞌihi na m gwara gị na m hụrụ gị nꞌokpuru osisi fiigi ahụ? Nꞌezie, ị ga-ahụ ihe dị ukwuu karịa nke a, nke pụrụ igosi gị na mụ onwe m bụ Onye nzọpụta ahụ nꞌeziokwu.